ल हेरिहाल्नुस है आज घट्यो सुनको मूल्य ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
ल हेरिहाल्नुस है आज घट्यो सुनको मूल्य !
Published :6August, 2020 12:59 pm
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज घटेको छ । सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार ३ सयमा कारोबार भएकोमा आज तोलामा एक सयले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार २ सय रहेको छ भने तेजावी सुन प्रतितोला ९१ हजार ७६० रहेको छ ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ १२ तोकिएको छ । त्यस्तै आज एक युएई दिरामको खरिददर ३२ रुपैयाँ ६८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको छ। एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ १३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ ।